Cofa indawo yokuKhangela: ukuKhangela ukuKhangela kuMsitho kwindawo engenaKhowudi | Martech Zone
CofaTale Ube nguvulindlela kumzi-mveliso wohlalutyo, ebonelela ngedatha yokuziphatha kunye nokubonakalayo okucacileyo okuncedisa iingcali ze-ecommerce kunye ne-analytics ukukhomba kunye nokuphucula imiba kwiindawo zabo. CofaTale entsha Umhleli obonakalayo ibonelela ngolunye uguquko, ngeendlela ezingenakhowudi zokudibanisa imicimbi kwindawo yakho yonke. Khomba nje kumcimbi wesiganeko sakho kwaye uchaze umcimbi ... CofaTale yenza okuseleyo.
kunye Umhleli obonakalayo, Clicktale yenye yeenkampani zokuqala ukubonelela ngesisombululo ngaphakathi kokukhutshwa kwe Ukuqaliswa kweAdobe, isizukulwana esilandelayo Umphathi wethegi yeAdobe kwiqonga leAdobe Cloud. Ukuphehlelelwa yiAdobe kuya kuvumela amashishini akwi-Intanethi ukudibanisa kunye nokulawula iithegi ukwenza imisebenzi yokuthengisa isebenze ngakumbi, ukunciphisa iindleko kunye nokuphucula ukusebenza kwewebhusayithi.
Ngokudibanisa Umhleli obonakalayo kuLungiso lweAdobe, abathengisi bedijithali banokufezekisa iimephu eziphambili ngohlobo oluqhelekileyo nolunomdla Abathengi beClicktale abayi kuba notshintsho olulula kuphela njengoko bonyusa ukumiliselwa yiAdobe ukuseta iminyhadala yeClicktale, kodwa bazuze kwelinye ithuba lokufumana amava edijithali kwidatha yabo yeClicktale.
Itekhnoloji ekhethekileyo yeClicktale ibonakalisa uhambo lwabathengi, inceda abathengisi baphucule ngcono amava edijithali kubathengi babo. Ngokusebenza nababoneleli ngetekhnoloji ephambili njengeClicktale, sinokuqinisekisa abathengi bethu ukuba baxhamle kwesona sixhobo someleleyo ukuza kuthi ga ngoku. UJon Viray, uMphathi weNtengiso yeMveliso, iAdobe
Njengengxenye yeClicktale kunye nentsebenzo eqhubekayo yeAdobe, ukumiliselwa kweAdobe kukwabandakanya inqaku eliya kuthi livumele abathengi kunye namaqabane ukuba afikelele kulwazi olwahlukileyo lukaClicktale kuludwe lwedatha ngaphakathi kuQalo lweAdobe. Oku kubonelela ngendlela elula kunye nenamandla yokwengeza usetyenziso olongezelelekileyo, olufana nokuthengisa izinto ezizenzekelayo, ilizwi lomthengi okanye nayiphi na enye inkqubo exhamlayo kuqokelelo lweenkcukacha zesikhangeli, kunye nedatha yeClicktale kunye nokuqonda.
Izisombululo zikaCofaTale zibandakanya:
Ukuchongwa kwendlela Iindlela-ezikwiphepha, iipateni zokuziphatha kunye neendlela ezibaluleke kakhulu eziqhuba uguquko.
Ubushushu -Ukuhamba kweMpuku, ukucofa imouse, ukufikelela-ekufikeleleni, ingqalelo kunye nokudibanisa imephu zobushushu.
Ukudlalwa kweseshoni -Bukela ukuphindaphinda kweeseshoni zabasebenzisi bakho zokukhangela ukubona kakuhle oko bakubonayo nabakwenzayo kwindawo yakho nge desktop okanye kwiselfowuni.
Uhlalutyo lokuGuqulwa -Fumanisa ukuba yintoni esebenzayo kwaye yintoni engekho kwifanele yakho kunye neefom
Uhlalutyo losetyenziso -Ukuqonda kwiimfuno zomsebenzisi kunye nokuziphatha kwii -apps zemveli kunye neehybrid.
Ukudityaniswa koHlaziyo -Kunye neAdobe, iWebtrends, kunye noHlaziyo lukaGoogle.
Ukuvavanywa kokudityaniswa -I-Adobe Target, iQubit, ngokuLungileyo, iKaizen, iMonetate, iOracle Maxymiser, eyona ilungileyo, iSayithiSpect, kunye neGoogle Optimize.
Umdibaniso woLawulo loMxholo -Kunye noMlawuli wamava eAdobe kunye neSitecore.
Ukuhlanganiswa kwengxelo -I-OpinionLab, iMedallia Digital, iPerceptions, Qaultrics, Usabilla, kunye noLife.
Ukudityaniswa koLawulo lweTag -Kunye neAdobe Markeitng Cloud, Ensighten, IBM, Tealium, Signal, kunye neGoogle Tag Manager.
Umdibaniso wezoRhwebo -Kunye neMagento, XCart, iZencart, kunye neYahoo! Amashishini amancinci.
tags: zodakaUhlalutyo lweadobeUmphathi wamava eAdobeI-Adobe Markeitng CloudUjoliso lweadobeuhlalutyo lomsitho wokuhlalutyaiziganeko zohlalutyoingqalelo imephu yobushushuukuqhubela phambiliukulandelwa komsithoi-google analyticsGoogle ulungiseleleUmphathi wethegi kaGoogleUbushushuIBMingqiqoEKaizenQhagamshela imephu yobushushuLivePersonMagentoIdijithali yeMedalliai-monetateintshukumo yemouse yokuhambisa ubushushuuluvongokufanelekileyoEyona ilungileyoI-Oracle MaxymiserQaultricsikubitskrolela ukufikelelauphawuindawoIndawo yeSpectIteamUsabillawndebguXCartYahoo! Amashishini amancinciUZencart